Home News Masuul katirsan Maamulka Degmada Balcad oo kasoo horjeestay xilka qaadis lagu sameeyay
Masuul katirsan Maamulka Degmada Balcad oo kasoo horjeestay xilka qaadis lagu sameeyay
Waxaa haatan soo baxaya khilaaf soo kala dhex galay Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Hir-Shabeelle,kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay Xogheyaha degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dhawaan ayaa waxaa soo baxday warqad xilka looga qaadayay Xoghayaha degmada Balcad,isla markaana lagu Magacaabay xoghaye Cusub,hayeeshee uu sheegay in dad dano gaar ah wata ama hab beel ku gambanaya aysan xilka ka qaadi Karin.
Xoghayiha degmada Balcad lana sheegay in xilka laga qaaday Maxamed Cade Axmed (Dhacdoy) oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in uusan arkin warqad ka timid Wasaaradda Arrimaha Gudaha Hir-Shabeelle iyo Madaxda ugu sareeysa Maamulkaas.
Hayeeshee uu sheegay in Xildhibaano ka tirsan Hir-Shabeelle ay arrintaasi masuul ka yihiin,isla markaana aysan xildhibaano iyo guddoomiyaha degmada Balcad xilka ka qaadi Karin.
Xogheyaha Cusub ee Maamulka degmada Balcad ee dhawaan la soo magacaabay ayaa Maalin ka hor waxaa loo qabtay munaasabad xil wareejin ah,wallow munaasabadaas uusan goobjoog ka aheyn Xoghayaha la sheegay in xilka laga qaaday ee Maxamed Cade Axmed (Dhacdoy).
Previous articleKenya iyo Somaliland oo dhex-maraya Heshiis ganacsi
Next articleIlaaladii Xildhibaan ka tirsan BJFS. oo isku dhiibay kooxda Shabaab (Sawiro)
How best to auction Somalia’s natural resources? PM Kheyre will